မင်းကမင်းက Smippy လားဆိုတာသိလား Martech Zone
စနေနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 27, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
သင်ဟာလူမှုမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ hippy (smippy) ဖြစ်ပြီး၊
သငျသညျ Twitter အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုကိုရပ်တန့်ရန်အသနားခံစာကိုစတင်ပါသို့မဟုတ်လက်မှတ်ထိုးပါTwitter ဟာအလိုအလျောက်တုန့်ပြန်မှုကိုရပ်တန့်သွားအောင်ဘာမှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး
သင်ထင်ပါသလား သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုရောင်းဖို့ဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာတွေမှာဇာတ်ကောင်တစ် ဦး တီထွင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီ ရောင်းအားနှင့်ထိတွေ့မှုတိုးလာစေသည့်တိုင်ပျက်ကွက်သည့်မဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်ထင်ပါသလား ဘလော့ဂ်များသည်ကြော်ငြာများ၊ ငွေပေးချေသောအချိတ်အဆက်များသို့မဟုတ်ကမကထပြုသောပို့စ်များကင်းမဲ့နေသင့်သည် ပြီးတော့ဘလော့ဂါတွေဟာသူတို့ရဲ့သုတေသနတွေအားလုံးကိုလုပ်သင့်ပြီးနှလုံးသားရဲ့ကောင်းမြတ်မှုကနေဘလော့ဂ်ပို့စ်တွေကိုကြင်နာစွာရေးသားသင့်ပါတယ်။
ငါ smippies ကိုချစ်ငါ့ကိုမှားယွင်းတဲ့မရကြဘူး ငါတစ်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ချင်တယ် - တောင်ပေါ်မှာ (ဂြိုဟ်တုဘရော့ဒ်ဘန်းဖြင့်) မြေကွက်အချို့ကိုဝယ်ယူရန်နှင့်ငွေအမြောက်အမြားကိုစုဆောင်းပြီးနောက်၊ သို့သော်ယခုနှင့်အကြားတွင်ငွေတောင်းခံလွှာကိုပေးချေရန်လိုအပ်သည်။
ကုမ္ပဏီများသည်အတိတ်ကာလကမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပိုမိုကောင်းမွန်သော ROI နှင့်ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုရရှိစေမည့်ကြားခံများ၏အားသာချက်ကိုယူရန်အမြော်အမြင်နှင့်ရဲစွမ်းသတ္တိရှိပါကကျွန်ုပ်၏ငွေတောင်းခံလွှာကိုပေးချေပါသည်။ သူတို့ကိုငါအဲဒီလိုလုပ်ပေးဖို့ကူညီပေးတယ်၊ ပြီးတော့ငါတောင်းပန်မှာမဟုတ်ဘူး။
Twitter ကို Marketing အလတ်စားတစ်ခုအနေနဲ့
Guy Kawasaki တွစ်တာဟာသမိုင်းမှာအကြီးကျယ်ဆုံး PR စနစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ Robert Scoble ကိုပြောခဲ့တယ်။ တွစ်တာကပြောင်းလဲနေတယ်။
မကြာသေးမီကပြုလုပ်သောတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းများတွင်တည်ထောင်သူ Evan Williams ကသူသည်လူမှုရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုထက် Twitter ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ တွစ်တာလည်းခြေလှမ်းတွေလှမ်းနေတယ် အောင်မြင်မှုအတွက်အတွက်ငွေသား။ အဲ့တာကိုယူ နင်!
တွစ်တာက ခွင့်ပြုချက်အပေါ်အခြေခံသည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလတ်စား။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကထောက်ပံ့ပေးသည် ကုမ္ပဏီများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအခွင့်အလမ်း သူတို့ထိရောက်သောယူဆပါသည်ဘယ်လိုသူတို့ကိုယ်သူတို့စျေးကွက်ရန်။ မှတဆင့်တိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်မှုအလိုအလျောက်အားဖွငျ့ဖွစျသညျ တေးရေး နှင့်ငါ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုအလိုအလျောက်တင်ခြင်း twitterfeedကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်စာရင်းသွင်းသူအရေအတွက်ကို ၅% တိုးမြှင့်ပြီးနေ့စဉ်ဖတ်ရှုသူ (တိုက်ရိုက်မှတိုက်ရိုက်) ကို ၈% တိုးလာသည်။
If သငျသညျ ငါ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ပါ၊ မင်းကမင်းကိုမင်းနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ပေးနေတာပဲ။ ငါလုပ်တဲ့အခါစိတ်မဆိုးပါနဲ့ ကုမ္ပဏီတိုင်းလုပ်သင့်သည်ပထမ ကြောင်းလက်ဆွဲအပေါ်အမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ပြန်ပြောပါ ကောင်းတဲ့တစ်ခုခုနဲ့ သင်ဒါကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင် မလိုက်နာပါ အဲဒါလွယ်ပါတယ်
Smippies သည်လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပို၍ စိတ်ပျက်စရာမဟုတ်ဘဲပိုမိုပျော်ရွှင်သင့်သည်။ Popups နှင့်အခြားထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်နေဝင်ချိန်သို့တဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်သွားသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကုမ္ပဏီများသည်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နှင့်စားသုံးသူနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စားသုံးသူများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်ကြိုးစားနေသည်၊ စားသုံးသူအား၎င်းတို့ကို ကန်၍ အော်ဟစ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ဤဥပမာ၏အကောင်းဆုံးဥပမာဖြစ်သည်။ Corporate blogging သည်ကုမ္ပဏီများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်၎င်းသည်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းနှစ်ခုလုံးအတွက်ထူးခြားသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ စားသုံးသူများသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင်ရှိသည် - ထိုတွင်ကုမ္ပဏီများရှိရန်လိုအပ်သည်။
ဒါကြောင့်သင်ဟာအရာရာကိုဖတ်ပြီးပြီ၊ ငါဟာငါဟာကြီးမားတဲ့အရင်းရှင်အရင်း ၀ က်တစ်ကောင်ပါ။ ကုမ္ပဏီတွေကိုအလတ်စားတိုင်းသုံးဖို့အကြံဥာဏ်ပေးရမယ်၊
ဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့လှပတဲ့အရာကနောက်ဆုံးတော့သူကကစားကွင်းကိုဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းထားတယ်။ အလတ်စားအလွဲသုံးစားပြုရန်ကြိုးစားသောကုမ္ပဏီများသည်ကျရှုံးရုံမျှမကအရှက်ရသွားလိမ့်မည်။ တွစ်တာ၊ ဘလော့ဂ်နှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားပြုခြင်းသည်နာကျင်မှုနှင့်အလျင်အမြန်အပြစ်ပေးခြင်းများနှင့်ကြုံတွေ့ရသည်။
လူတိုင်းအတွက်ကောင်းပါတယ် Smippies ပါဝင်သည်
Blog Bloke - သင့်ကိုပိုကောင်းတဲ့ Blogger တစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကူညီခြင်း
ဒီဇင်ဘာ 27, 2008 မှာ 9: 02 AM
ဟင် .. Kawasaki ကလူသစ်ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ဖြစ်တာနဲ့ spam လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားဆိုပြီးမကြာသေးခင်ကငါမှတ်မိသေးတယ်။ ကောင်းပြီငါသူ့ကိုအနည်းငယ်နှုတ်ရိုက်တာခဲ့ရတယ်နှင့် Dave Winer ပင်ထိုတစျခုအပေါ်ငါနှင့်အတူသဘောတူခဲ့သည်။ 🙂
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Merry Christmas Dougy ။ သင့်မိသားစုအတွက်အကောင်းဆုံးတစ်ခုနှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။
27:2008 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 12, 57 တွင်
ဟေ့ Bloke! ခရစ္စမတ်ပွဲလည်းသင့်အတွက်ကောင်းပါတယ်
သို့သော် Spam သည်ခွင့်ပြုချက်ကိုအခြေခံသည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟုတ်ပါ။
27:2008 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 3, 15 တွင်
ဒီ post ကိုကြိုက်ပါ ဒါဟာတကယ်ငါ့ကို LOL ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ငါစတင်တုံ့ပြန်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်ကို ပို၍ စဉ်းစားလာသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ blog တွင်တုန့်ပြန်မှုတစ်ခုတင်ခဲ့သည်။ http://www.afhill.com/blog။ အဲဒီမှာ smippies ဆက်ဆက်ရှိပါတယ်, ဖွယ်ရှိအမြဲဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်လူမှုမီဒီယာ၏နှစ်ဖက်စလုံးကိုအသိအမှတ်ပြုသူများဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စသည့်အနံ့အရသာများရရှိရန်ကြိုးစားရန်လိုအပ်သည်။
Diane ဖြစ်သူ Scott
28:2008 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 4, 17 တွင်
တကယ်တော့ Andrea ကသူရဲ့ post ကနေမင်းရဲ့ post နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်မှာလိုက်ခဲ့ (ငါလည်းဒါကိုကိုးကားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်)
ကျိန်းသေ Smippy လူအစုအဝေးထဲကငါ့ကို (နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ယက်) ရေတွက်။ သို့သော်သင်၏တင်သည့်ဖော်ပြချက်အရဘလော့ဂ်များကိုအသိဥာဏ်ရှိရှိဖြင့်အစစ်အမှန်လူသားတစ် ဦး အနေနှင့် Smippy နှင့် Smullets (Andrea ၏ချီးမွမ်းချက်များ) နှစ်ခုစလုံးတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။
ဘလော့ဂ်လုပ်ခြင်းသည်သင်ထုတ်လွှင့်နေသောအရာ၏လက်ဖြင့် (လက်ဖြင့်) သင်ပြီးသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်“ အလိုအလျောက်” ဖြစ်သည်။ ငါ့ကိုရူးသွပ်စေသောမောင်းနှင်သောဘလော့ဂ်များသည်လူတို့၏လက်များကိုတည်ဆောက်နေစဉ်တွင်သာတွေ့ကြုံခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ထူးဆန်းသည်မှာတွစ်တာသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအကြောင်းအရာဖြစ်ဟန်တူသည် - အီးမေးလ်များနှင့်ပို့စ်များတွင်ပါ။ ငါတို့လည်းဒီအကြောင်းကိုအရင်ဖုံးထားပြီးသုံးခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်စကားလုံးအသစ်တစ်ခုကိုသင်ယူရတာနဲ့တူတယ်။ အရာဝတ္ထုတွေထပ်ပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းပြချက်အမြဲရှိတယ်။ (ဒါကြောင့်တွစ်တာကိုမွမ်းမံရန်အစီအစဉ်ရှိတာကြောင့်စကြာ ၀ universeာကငါ့ကိုပြောနေပုံရသည်) ။
ဒီဇင်ဘာ 29, 2008 မှာ 1: 08 AM
Smippy, Smulets …ဒါကငါ့ကိုရယ်စေတယ်။ smippies တွေဘယ်လိုအရှက်ရသွားမလဲဆိုတာကိုငါကောင်းကောင်းသဘောကျတယ်။ ငါကြားဖူးတာပဲ .. အဓိကအကြောင်းအရာကလွဲလို့အရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ Teeners တွေဆီကနေအသွားအလာချင်ရင်မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုကြည့်ဖို့အတွက်ခေါင်းလောင်းတွေ၊
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ piney တောအုပ်၌ဖြစ်၏, ကချစ်ပေမယ့်နေဆဲလည်းပေးဆောင်ဖို့ငွေတောင်းခံလွှာရှိသည်။ 🙁
29:2008 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 4, 41 တွင်
Doug အလွန်ကောင်းသော post တစ်ခု။ ကိုယ်ကြိုက်တယ်။
ကယ်လီ Schmith က
4:2009 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 9, 29
ငါလွင့်မျောနေသောစကားပြောဆိုမှုကိုလှုံဆော်ပေးသောအရာကိုနှစ်သက်မိသည်။ Doug, ငါသည်သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တွေ့ကြုံအတွေ့အကြုံမှသင်ကမ်းလှမ်းသောပွင့်လင်းတန်ဖိုးထားတယ်။ ၎င်းသည်သင်၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုအလွှာများထပ်မံဖြည့်စွက်ပြီးလူများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သောဖြစ်ရပ်မှန်များကိုဖော်ပြပေးသည်။
ယခုတွင်ငါသည်မြန်မြန်လူမှုရေးမီဒီယာဝေါဟာရကိုကျူးလွန်ရန်အလျင်အမြန်ကြိုးစား။ Smippy ကိုဝါကျတစ်ခုဖြင့်အသုံးပြုရမည်။ 🙂